Aadan Saransoor “Shariif Xasan wuxuu rabaa in Madaxtooyadiisa in uu doorashada ku qabto” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Aadan Saransoor “Shariif Xasan wuxuu rabaa in Madaxtooyadiisa in uu doorashada ku...
Aadan Saransoor “Shariif Xasan wuxuu rabaa in Madaxtooyadiisa in uu doorashada ku qabto”
Aadan Maxamed Nuur (Saransoor) oo ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa ka digay in doorashada lagu qabto Hoolka Madaxtooyada magaalada Baydhabo, halkaasoo uu degan yahay Shariif Xasan.
Saransoor oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa ku eedeeyay Shariif Xasan inuu awood u adeegsanayo siyaasiyiinta ka soo horjeeda, isla markaana uu doonayo in doorashada ku qabto halka uu degan yahay.
“In doorashada ka dhacdo hoolkii Madaxtooyada oo ah halka uu degan yahay Sii Hayaha Madaxweynaha, waxaa taas u aragnaa inay tahay sharci darro iyo awood”ayuu yiri Saransoor oo ku baaqay in doorashada ka dhacdo goob madax banaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Shariif Xasan uu doonayo inuu magacaabo Guddi Doorasho, isla markaana u gudbiyo Baarlamaanka.
Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa lagu wadaa inay dhacdo bisha November ee sanadkan 2018, waxaana jira Musharaxiin dhowr ah oo olole ugu jira xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, halka Madaxweynaha xilka haya Shariif Xasan uu dadaal ugu jiro sidii uu mar kale ugu guuleysan lahaa.